China 480v Ebube Ibu China Manufacturers & Suppliers & Factory
480v Ebube Ibu - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka 480v Ebube Ibu)
Obosara Ugwu Anyị emeela ka ọ dị ọhụrụ, nke a dị nnọọ mma, ma o nwere nnukwu ọkụ - 130lm kwa watt. Arụ ọrụ n'ime oke 100-277Vac. Ụgbọ mmiri ụgbọala 100W na- adọba ụgbọala dị na ya gbanwee ọkụ 13000 lumens nke nwere ike dochie 300 Watt MH ma ọ bụ HPS / HID ọkụ. Bupu ugbua ike gi ugbua site na dochie ihe eji eme ihe...
100w E40 Ebube nnukwu ọkụ 130lm / w
100w E40 130lm / w Na-ere ọkụ na nnukwu ọkụ , BBier High Light Tech bụ onye na-ebu ígwè dị elu na ime ụlọ na ọkụ ọkụ usoro na ngwọta maka ọrụ gị. Ejiri Supermarket100w ìhè 130lm / w bụ ihe ngwọta dị mfe maka ime ụlọ na n'èzí ebe ọkụ ọkụ dị na ngwa ahia na azụmahịa. Ụlọ nkwakọba ihe 100w E40 130lm / w Led...
480v Led Corn Cob Ọfụma kwesịrị ekwesị 60W E27
Okpokoro Uhie 60W E27 bụ 7800Lm 5000K na oghere E27 E39, nhata 175W incandescent bulb na MH HPS. Ntughari nke ala ala ala na ikpo ọkụ na-enyere aka ikpochapu ọkụ, na-agbasapụ okpukpu 60W nke ọka dịka ihe ruru oge 50000. Emere nke alamini ugbo elu bu ihe kwesiri iru na nke oma nke nwere ike inye aka icho ihe ndia nke...
Agba agba agba 300W Ebube n'Ọdọ Mmiri
Anyị Led Street Light 300w bụ 130lm / w na 39000lm na Led Street Light Heads Uk 300W nwere ike dochie HPS / HID 10 00 watt . Led Street Light Light bụ Ụdị 3M. Ndị na- ere ọkụ n'okporo ámá na-eduzi bụ mmiri mmiri na-enweghị mmiri na nke a na- eduga n'okporo ámá ìhè ihe onwunwe bụ ihe nkedo nke luminom. Nke a...
Okporo Ụzọ Ejiri Ebube Ntugharị Nye Street Garden
20W Ogige Ugwu Ogige N'èzí N'elu Okpomọkụ Njirimara: 1. 20W okporo ụzọ okporo ụzọ : Nchekwa ike, ihe gbasara gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2.Otu jijiji, mgbochi mmiri, enweghị ntighari, enweghị ihe ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4....
Ebube n'èzí N'elu Osimiri 150W
Ebube n'èzí N'elu Osimiri 150W 1. 15 0W na- eduzi Post Top ìhè Ịkụkwa ike, na gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe dị elu 150W Ugbochi, mgbochi mmiri, enweghị ncha, ọ dịghị ihe mgbochi, na-echebe anya gị. 3. 150W post ìhè mpaghara Elu ike na kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ. 4....
Ebube 100W LED Post Top Mpaghara ìhè
Ebube 100W LED Post Top Mpaghara ìhè 1. 10 0W na- eduzi Post Top ìhè Ịkụbe ọkụ , nchekwa gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe a na-ahụ maka ogwe ọkụ ihu -egwu, mgbochi mmiri, enweghị nchapụ, ọ dịghị ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla....
150W UFO Diana Elu Mmiri Ebube Okpu Ugwu
150W UFO Diana Elu Osimiri Ukwu na Ugwu Ugwu 1. 5000K 150W ufo mere ka ọkụ na -ejikarị eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ogige ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. LED High Bay Light DLC bụ ọhụụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo...
Ebube n'èzí N'elu okporo ụzọ maka okporo ụzọ
Ebe a na-agbanye ntụpọ maka okporo ámá Street Yard Garden Atụmatụ: 1. duru Post kacha elu ọkụ Ịchekwa ikike, gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe a na-ahụ maka ogwe ọkụ ihu -egwu, mgbochi mmiri, enweghị nchapụ, ọ dịghị ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ...
Ebube na-ekpuchi oghere na-ekpo ọkụ 130W
Ebube na-ekpuchi oghere na-ekpo ọkụ 130W Ebube na-eduzi anyị Adiding 130W na- eji àgwà ihuenyo 3030 Dhip, nwere ike iguzogide ihe dị elu ma na-ekesa ìhè. Nke a Led Petrol Station Lighting na- eji ọkwọ ụgbọala dị elu, nke na-egosi CE ROHS abd afọ atọ. Ebe anyị na-anọ n'ọdụ ụgbọ mmiri na-enwu eji nkà na ụzụ ọhụụ...
Ebube ụlọ ọrụ 2x4ft duhiere ọkụ ọkụ
Ebube ụlọ ọrụ 2x4ft duhiere ọkụ ọkụ Ihe ọkụkụ 2x4 ahụ 35W nwere 4,550 lumens na ọnụ ntụ nke 120 degrees. Nke a na-eme ka ihe ọkụkụ na-egbu ọkụ nwere ike dochie anya ọkụ ọ bụla dị na 2x4ft. Ihe omimi a na-emighị emetụ na-adị mfe maka ụlọ elu na obere ohere maka ụlọ. Ebube anyị 2x4 na-agba ọsọ bụ DLC nke a na-edepụta na...
80W Ebube Ọrụ Ọrụ Ihie
80W Ebube Ọrụ Ọrụ Ihie <Ọdịdị Echeghị Agbanwe Agbanwe > : Nke a 80W na-ebute ọkụ ọkụ ọrụ na-adị ngwa ma dịrị mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha na-agbakwunye agbatị na nchebe iji kpochapụ ihe ize ndụ nke iko dị nro agbajiri. "Super...
75W Ebube Ebube Ebube Ebube Ebube Ebube
Ngwá Ngwá Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ bụ Ngosipụta nke Bbier kachasị nhazi ihu igwe. Nke a Led Acorn Post Top Fixtures abụghị naanị ntanye ọkụ kamakwa otu mpempe akwụkwọ. Die-cast aluminum pure metal body has a impact-resistant, lenses polycarbonate, nke na-echebe ndị ọkụ si mmiri, ájá, na irighiri ihe. Ejiji ọkụ anyị na...
50W Ebube kachasị elu Ntọala Ụzọ Ụzọ Ụzọ Ntanụ
Bbier Led Landscape Path Lighting 50w bụ ihe na-anọchi anya maka 175W HID ma ọ bụ HPS Fixtures. Zọpụta ike, ego, na oge site na-eme ka ọkụ ahụ gaa n'Ìhè Mmiri anyị . Na 50 Watts na ọnụ lumen nke 6500, ogige ntụrụndụ, ebe ụgbọala, ogige egwuregwu na n'okporo ámá ga-adịgide na-adị mma ma na-egbuke egbuke na Led...
20W Ebube n'èzí n'èzí
Nke a anyanwụ Ebube Mpịkụụ bụ ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ Ekekọrịtare Mpempe akwụkwọ na anyanwụ na-akwado afọ a. Anyị 20w n'èzí anyanwụ na-enwu gbaa nwere 18V / 21W maka ike panel panel. Ụzọ 20w na- eduzi ìhè ụzọ ụzọ anyanwụ bụ 3000-3200lm na 150-160lm / w. Elu igwe na- agbago maka oghere ọkụ iri abụọ nke iri abụọ ca...
Ngwá agha 50w anyị na-agbanye n'ahịrị kachasị elu bụ Ngwá agha , Oghere Barn, Alleyways, ụgbọala ụgbọala na Ogige. Ndị a n'èzí Post Top Lights na - agbada maka awa 50,000 na akwụkwọ afọ 5. 50W Led Post Top Light bụ 6500lm, dochie 175w HPS MH HID bulbs. Bbier Led Post Top Lights bụ CE ROHS ETL DLC SAA gbaara ya...
60W Ebube Agbanwe Agbanwe 175W HID Replacement
Na ihe ịrịba ìhè mmepụta nke 7.200 lumens ma ọ bụ 120Lm / W na 360 directional ìhè, na 5000k zoro Nnọchi bọlbụ ghọtakwuo nnukwu ebe ma ime ụlọ na n'èzí na a crystal ọcha na-egbukepụ egbukepụ. E ji ígwè oyi na-arụ ọrụ na-eme ka anyị nweta 60w Led Lighting Replacement usoro ikpochapu usoro nke oma. Belata ọkụ...
Ebube Ebube Ebube Egwu Mpekere 75 Watts 9750lm
Ebube Ebube Ebube Ebube na-acha na-acha ọcha 75W 8400Lm 5000K Okpomọkụ n'èzí maka Akwụkwọ Street Light Yard Light Ọ dịghị mkpa maka iji aka na-arụ ọrụ mere Post Top osisi ìhè dị ka ndị wuru na-mgbede ka chi ọbụbọ photocell achọpụta ìhè na-akpaghị aka na-agbanyụ ya na na na. Ejikọta ya na ememe ọkụ nke 250W. Obere...
Ebube ime ụlọ duru ọka cob bulb 120W
Ebube ime ụlọ duru ọka cob bulb 120W E39 Isi / Large Mogul Style Akwụghachi bọtịnụ ọkụ. Mfe Ego Efere na E39 ada ọka ìhè : 360 Degree LED Corn Light Output Kacha ọhụrụ LED Technology: SMD2835 ikanam na 50,000 Ndụ 110-277 Volt dakọtara (110, 208, 240, 277vac niile dị mma) edu ọka cob bọlbụ : Bright white 5000k color...
1x4 25W Ebube na-eme ka ihe nkwụnyeghachi
Bbier 1x4 Mmiri na-egbuke egbuke na- enye ndị ọzọ aka na-eme ka ndị na-ahụ maka ọdịmma nke fluorescent, nke ruru 120 lumens per watt. Nke a na- agbanye ọkụ dị na 0-10v dimming ma ọ bụ nzọụkwụ na-emetụta na afọ 5 warranty.Our Led Troffer Retrofit dị mma iji dochie ihe ndị na-enye ìhè. 1 x4 Onye na -agbanye nsogbu zuru...
480v Ebube Ibu 480V Ebube Ibu 50W Ebube Ebube 150w E40 Ebube Ebube 60W Ebube Mgbachi 50W Ebube Ebube Ebube 80w E40 Ebube Ebube Ebube 100w E40 Ebube Ebube Ebube